Iimpazamo ezi-7 zabahambi baseLas Vegas benza yonke imihla – CYMRU
No Comments on Iimpazamo ezi-7 zabahambi baseLas Vegas benza yonke imihla
I-Las Vegas iseyeyona ndawo ithandwa kakhulu ekungcakazeni. Kodwa iSin City ayisiyonto yabongcakazo kwakhona. Isixeko sisebenze nzima ukulenza ikomkhulu lokuzonwabisa lehlabathi ngelixa ligcina imeko yalo kuluntu lokungcakaza.
Ayinamsebenzi ukuba uya eLas Vegas ukungcakaza okanye ukonwabisa okanye zombini; ufuna ukunqanda ukwenza iimpazamo ezininzi kakhulu kuhambo lwakho. Nalu uluhlu lweempazamo ezisixhenxe eziphezulu ezenziwa ngabakhenkethi beLas Vegas yonke imihla ofanele uziphephe.
1-Ungaseli Amanzi Aneleyo
Kulula ukulibala ukuba uphakathi enkangala xa useLas Vegas. Ude uphume ngaphandle kubonakala ngathi nayiphi na enye indawo emhlabeni. Kodwa xa ushiya iingcango zekhasino xa ilanga liphuma ubushushu kwaye nomswakama ubetha njengesitena.
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu olundwendweleyo eLas Vegas ekufuneka ziyenzile kukusela amanzi ngokwaneleyo ukuze ungasuki emzimbeni. Nokuba awuphumi phandle ngelixa ukwi-Las Vegas, umoya okwi-Casinos unokusebenza ngokuchasene nawe uhlala u-hydrate.
Uninzi lwabantu lucinga ukuba bangafumana onke amanzi abawafunayo kwezinye iintlobo zeziselo, kodwa ezinye iziselo zisebenza ngokuchasene nawe. Iziselo ezinxilisayo kunye neti zinokukwenza ube ngumzimba ngakumbi.
Nokuba usela ezinye iintlobo zotywala, yenza isicwangciso sokusela amanzi yonke imihla. Ndiyawathanda amanzi, ngenxa yoko ayiyongxaki le kum, kodwa inkosikazi yam ayikuthi ukusela amanzi. Kuya kufuneka ibeke isibalixesha kwifowuni yakhe ukuze imkhumbuze ukuba lixesha lokusela ibhotile yamanzi.
Elinye iqhinga onokulisebenzisa kukufumana amanzi ngalo lonke ixesha usitya, nokuba usele enye into. Qiniseka ukuba ugqibezela amanzi akho ngesidlo ngasinye. Oku kunceda ukusela ubuncinci iiglasi ezimbini okanye ezintathu zamanzi yonke imihla.
2 -Aunaso Isicwangciso sohambo lwabo
ILas Vegas inezinketho ezininzi zokungcakaza, ukutya, kunye nokuzonwabisa ekulula ukuba ubenengxaki. Ukuba awucwangcisi uhambo lwakho ngaphambi kokuba uhambe kulula ukufumana izinto ezininzi kangangokuba ufuna ukwenza ukuba uzive ungxamile kwaye ngathi ulahlekelwe yinto.
Ndikho konke ukufumana nokufumana izinto ezintsha, kodwa ndihlala ndicwangcisa uninzi lotyelelo lwam eLas Vegas ngaphambi kokuba ndiye. Ndishiya ixesha elincinci simahla kucwangciso lwam ukuze ndikwazi ukuthatha imiboniso bhanyabhanya okanye iresityu entsha ukuba ndibona enye endifuna ukuyindwendwela, kodwa andizivumeli ukuba ziphazamiseke kakhulu.
Ukuba ucwangcisa ukuthatha uhambo olunye ukuya eLas Vegas ebomini bakho kunokuba nzima ukukhetha phakathi kwazo zonke izinto onokukhetha kuzo. Kodwa ukuba uyazi ukuba ungabuya kuthatha uxinzelelo. Xa usazi ukuba ungabuya uyazi ukuba awuzukwenza konke kuhambo lwakho lwangoku.
Gcina uluhlu lwezinto ozibonayo ukuba ufuna ukuzama, kwaye xa ucwangcisa uhambo lwakho olulandelayo ungabandakanya ezinye okanye zonke. Ewe kunjalo, ayinguye wonke umntu onjengam kwaye ufuna ukuba phantse yonke imizuzu ecwangcisiweyo. Ukuba uyakonwabela ukuzonwabisa eLas Vegas lukhetho oluhle. Ngena nje kwindiza kwaye uhambe, kwaye awuzukuphelelwa zizinto oza kuzenza.
Xa ndisiya eLas Vegas esona sizathu siphambili sokuya kukungcakaza. Umfazi wam ungcakaza nje xa sisiya, kodwa esona sizathu sokuhamba asinanto yakwenza nongcakazo. Ayinamsebenzi yeyiphi eyona nto iphambili kukuba uyile eLas Vegas; ukuba ungcakaza ngalo lonke ixesha ulapho kuya kufuneka ulumke ungongcwabi kakhulu.
Iikhasino zeLas Vegas zenziwe ngendlela yokuba ulibale malunga nexesha kunye nokungcakazwa ixesha elide ukuba banokugcina koomatshini be-slot okanye kwiitafile. Awunakubona ngaphandle kweendawo ezininzi zekhasino kwaye abanazo iiwotshi ezindongeni. Iikhasino zifuna ukuba ulibale yonke enye into esemhlabeni kwaye uqhubeke nokungcakaza.
Eyona ndlela ndiyifumeneyo yokuphepha ukungcakaza kakhulu xa ndikwi-Las Vegas ukuseta isibali xesha kwifowuni yam. Ndenza uhlahlo-lwabiwo-mali lwexesha elithile lokungcakaza, kwaye xa ixesha lam liphelile kufuneka ndiyeke ukungcakaza ukuze ndiye kwinto elandelayo kwishedyuli yam.
4 -Ungangeni kwiiklabhu zoMdlali
Abakhenkethi abaninzi abacingi ukuba lixesha labo lokujoyina iklabhu yomdlali xa baye eLas Vegas. Kuba bandwendwela kube kanye, okanye bangacwangcisi ukubuya de kube ngunyaka olandelayo, abacingi ukuba banokufumana ii-comps ezaneleyo ukwenza kufanelekile ukujoyina.
Le yimpazamo kwisibini esitshatileyo ezahlukileyo. Isizathu sokuqala sokuba le yimpazamo kuxa ujoyina iklabhu yomdlali ikubeka kuluhlu lokukhuthaza ikhasino. Iibhasino zithumela inyuselo kunye nokunikezelwa okukhethekileyo kumalungu eklabhu yomdlali wabo, ukuze rhoqo ufumane umvuzo omkhulu kuhambo lwakho olulandelayo.
Isizathu sesibini sokuba kuyimpazamo ukungabhaliseli iklabhu yomdlali apho uya kungcakaza khona nangona ungafumani mali ingako kwii-comps; into ilunge nganto. Nokuba ufumana nje isigqebhezana simahla, kungokutya okuncinci ekufuneka uhlawule kuko kuhambo lwakho.
Abakhenkethi abaninzi eLas Vegas bayalibala ukupakisha ijacket. Bacinga ukuba ngenxa yokuba bephakathi kwintlango abanakhathazeka ngayo ngokuba kuyabanda. Kodwa inyani yeyokuba xa ilanga litshonile linokubanda kakhulu enkqantosini.
Ndihlala ndipakisha ibhatyi ekhanyayo xa
← Emva kokhetho lwePatriots ‘ngaphandle, iiBhili ziZinto eziFunwayo ukuze uphumelele kwi-AFC eMpuma → Imidlalo yeMarble kunye nokungcakaza